Loza teny Tsaramasay Maty tsy tra-drano ilay ankizivavy 8 taona
Araka ny angom-baovaon’ny polisim-pirenena, mianatra eny Anjanahary ilay ankizy voadonan’ny kamiô teo Tsaramasy.
Rehefa tsy tonga ny mpampianatra dia nalefa nody izy ireo. Teny am-pandehanana hody ilay zazavavy 8 taona no tratran’ny lozam-pifamoivoizana omaly maraina. Araka ny voalazan’ny nanatri-maso, niampita tampoka ilay zaza ka tsy nampoizin’ilay mpamily kamiô 22 taona, tamin’ny boulevard de l’Europe hihazo an’Ankorondrano. Etsy an-daniny anefa, nisy ihany nanatri-maso nanambara fa nandeha mafy ilay fiara vaventy izay nihoatra am-pandehanana fiara hafa ka nahatonga ny loza. Tsy nisy mpanaraka io zaza io raha ny filazan’ny mpitandro filaminana eo amin’ny paositry ny polisy Antaniavo.
«Tamin’ny 8 ora latsaka no nitranga ny fanitsahan’ny fiara mpitatitra biriky ilay mpianatra. Maty tsy tra-drano io zaza io. Teo amin’ny faritra Ankazomanga ampitan’ny Fiangonana Tsaramasay no niseho ny loza. Efa nentin’ny polisy misahana ny lozam-pifamoivoizana Tsaralalana ny mpamily ilay fiara mpitatitra biriky», hoy ny tomponandraikitry ny serasera eo anivon’ny polisin’Antaniavo, nandritra ny tafa manokana. Eo am-panatanterahana ny fanadihadiana ny tompon’andraikitry ny famotorana eo anivon’ny polisim-pirenena, ary hatolotra ny fitsarana rehefa vita izany. Manana andraikitra koa ny sekoly amin’izao fampodiana zaza tsy ara-potoana izao.